BUDDHIST TERMS' Dictionary: DESIGNATION - ပညတ္တိ
BUDDHIST TERMS' Dictionary
Namo tassa bhagavato arahato sammᾱsambuddhassa.
နမော တဿ ဘဂ၀တော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ။
ဗုဒ္ဓသာသနာ အဓွန့်ရှည်ပြန့်ပွားရန် ရည်ရွယ်၍ လည်းကောင်း၊ မိမိကိုးကွယ်ရာဘာသာ၏ အနှစ်သာရကို သိရှိရန် ရည်ရွယ်၍ လည်းကောင်း၊ တခါတရံ ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများအား နိုင်ငံခြားသားများကို ရှင်းပြရာတွင် အသုံးအနှုံးကွဲလွဲတာနှင့်အမျှ ဆိုလိုရင်းပျောက်ပြီး၊ ဗုဒ္ဓ၏ အနှစ်သာရရှိသော အဆုံးအမများအား ပေါ့ပျက်ပျက်မထင်စေရန် ရည်ရွယ်၍လည်းကောင်း၊ .... .... ....
.... လည်းကောင်းပေါင်းများစွာဖြင့် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Digitize by : ကိုရုပ်ဆိုး
“၀“ နှင့်စသော - (14)
“၀” နှင့်စသော - (5)
“က” နှင့်စသော - (13)
“ခ” နှင့်စသော - (2)
“ဂ” နှင့်စသော - (3)
“စ” နှင့်စသော - (22)
“ဆ” နှင့်စသော - (2)
“ဇ” နှင့်စသော - (3)
“တ” နှင့်စသော - (5)
“ထ” နှင့်စသော - (1)
“ဒ” နှင့်စသော - (6)
“ဓ” နှင့်စသော - (6)
“န” နှင့်စသော (3)
“ပ” နှင့်စသော - (22)
“ဗ” နှင့်စသော - (7)
“ဘ” နှင့်စသော - (3)
“မ” နှင့်စသော - (7)
“ယ” နှင့်စသော - (1)
“ရ” နှင့်စသော - (2)
“လ” နှင့်စသော - (2)
“သ” နှင့်စသော - (31)
“အ” နှင့်စသော - (46)
“ဥ” နှင့်စသော - (5)
“ဧ” နှင့်စသော - (2)
A နှင့်စသော - (37)
B နှင့်စသော - (20)
C နှင့်စသော - (31)
D နှင့်စသော - (26)
E နှင့်စသော - (41)
F နှင့်စသော - (38)
G နှင့်စသော - (8)
H နှင့်စသော - (12)
I နှင့်စသော - (17)
K နှင့်စသော - (4)
L နှင့်စသော - (14)
M နှင့်စသော - (26)
N နှင့်စသော - (17)
O နှင့်စသော - (16)
P နှင့်စသော - (53)
R နှင့်စသော - (22)
S နှင့်စသော - (33)
T နှင့်စသော - (11)
U နှင့်စသော - (7)
V နှင့်စသော - (4)
W နှင့်စသော - (12)
Y နှင့်စသော - (1)
Z နှင့်စသော - (1)
DESIGNATION - ပညတ္တိ
ပညတ္တိ - ပညတ်၊ အမည်နာမ၊ ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်း။
ရှင်နာဂသေန - ဟူသော ဝေါဟာရသည် အမည်နာမ ပညတ်မျှသာ ဖြစ်၏။ ခေါ်ဝေါ်ခြင်းမျှသာ ဖြစ်၏။
Conventional designation; name; concept
The term Nᾱgasean is onlyaname, designation.
လာရောက်လည်ပတ်သူအပေါင်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာ ကြပါစေ ...။
“မိဘ၊ ညီအကိုမောင်နှမ၊ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုးညာသကာ” အစုစုတို့အား
ပေးရသောလက်သာ ဖြစ်ရပါလို၏ ဘုရား။ အဟိတ်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ
ဗုဒ္ဓဒေသနာတော် ဝေါဟာရ အဘိဓာန်
A Dictionary of Buddhist Terms